[Review – Tips] Top+10 quà tặng sinh nhật mẹ ý nghĩa nhất | Muasalebang - Muasalebang
[Review – Tips] Top+10 quà tặng sinh nhật mẹ ý nghĩa nhất | Muasalebang
Mẹ và Bé 0 lượt xem 17/04/2022
Đang Đọc: [Review – Tips] Top+10 quà tặng sinh nhật mẹ ý nghĩa nhất | Muasalebang in Muasalebang
Impela izipho zosuku lokuzalwa zijwayeleke kakhulu kuwo wonke umuntu. Njalo ngonyaka lapho kufika usuku lokuzalwa lomuntu, kufanele sizibuze njalo mayelana nokukhetha izipho. Kowesifazane wakho okhethekile ongumama, ukukhetha ukuthi ungathola kanjani isipho esinengqondo ngempela kunzima kakhulu. Ake sithole futhi sibheke izipho ezinengqondo zomama.
1 Incazelo yosuku lokuzalwa
2 Kungani kufanele unikeze izipho zosuku lokuzalwa?
3 Kusho ukuthini ukunikeza izipho zosuku lokuzalwa?
4 Isiphi isipho sosuku lokuzalwa okufanele usikhethele umama?
4.1 Kufanele ukhethe isipho mayelana nempilo
4.2 Izipho zomoya
5 Izikhathi zokupha umama izipho
5.1 1. Isipho sikamama sosuku lokuzalwa
5.2 2. Isipho sika-10/10 sikamama
5.3 3. Usuku Lomama: ISonto Lesibili likaMeyi
5.4 4. Izipho zokugubha usuku lomshado wabazali
5.5 5. Isipho sikamama 8/3
5.6 6. Izipho zoSuku Lomama kanye noNcibijane
6 Izipho eziyi-10 ezinengqondo zikamama ngosuku lwakhe lokuzalwa
6.1 1. Izimbali ezintsha – Isipho esizwakalayo sosuku lokuzalwa sikamama
6.2 2. Isethi ye-makeup ephezulu
6.3 3. Isipho sosuku lokuzalwa sikamama ingubo yemfashini
6.4 4. Imigexo
6.5 5. Izicathulo ezithambile
6.6 6. Ukudla okunomsoco
6.7 7. Izikhwama zemali
6.8 8. Izikhwama
6.9 9. Nebulizer
6.10 10. Umshini wokubhucunga
Incazelo yosuku lokuzalwa
Usuku lokuzalwa usuku lokuzalwa. Kucatshangelwa ukuthi yadabuka eNtshonalanga. Indawo lapho kukhona izinkolelo mayelana nezinto ezifana: imimoya, izingelosi, amademoni. Bakholelwa ukuthi minyaka yonke ngosuku lwabo lokuzalwa, imimoya emibi izofika kubo futhi ibabeke engozini. Ngakho ukuze baxoshe lowo moya, benza idili nomkhaya nabangane.
Kungani kufanele unikeze izipho zosuku lokuzalwa?
Lena enye yezindlela zokubonisa intshisekelo yakho kumamukeli. Isipho sosuku lokuzalwa, esikhulu noma esincane, siyisikhumbuzo esingasoze salibaleka. Ukunikeza izipho ngosuku lwakho lokuzalwa kuyindlela yokubonisa uthando lwakho kumuntu omthandayo.
Kusho ukuthini ukunikeza izipho zosuku lokuzalwa?
Njengamanye amazwe emhlabeni eVietnam, usuku lwakho lokuzalwa luphinde lube yithuba lokuthi unikeze izipho, izimbali ezintsha nezilokotho ezinhle ezihlotsheni nakubangane. Kusho ukuhlanganisa abantu ndawonye, ​​ukusondelana, ukuqondana kangcono.
Isiphi isipho sosuku lokuzalwa okufanele usikhethele umama?
Izipho zikamama ngosuku lwakhe lokuzalwa ziyinto ejabulisayo kuye. Nakuba izikhathi eziningi zonyaka ungase ungabi naso isipho sikamama wakho. Kodwa usuku lokuzalwa luwusuku olubalulekile. Kunezipho eziningi zokuzalwa ezinengqondo zikamama njengezimbali, ukudla okufudumele komndeni, …
Kufanele ukhethe isipho mayelana nempilo
Impilo kade yaba yinto ekhathaza wonke umuntu. Ikakhulukazi esimweni samanje sokungavikeleki kokudla. Ngokunakekela kwakho umama wakho kanye nomkhosi omncane, ungakhetha isipho esinengqondo esingamsiza ukuba anakekele impilo yakhe.
Ungakhetha umuthi, ukudla okusebenzayo, umshini wokuhlolwa kwezokwelapha, ukunakekelwa kwezempilo komuntu siqu, …
Asikho isidingo sokukhetha isipho sokunethezeka. Ngoba isipho, nakuba silula, sivela ngobuqotho obuzokwenza umama athinteke. Uzolethela umama wakho injabulo nenjabulo enkulu ngalezi zipho ezingokomoya.
Izikhathi zokupha umama izipho
Ukunikeza izipho kungenye yobuhle bamasiko hhayi eVietnam kuphela kodwa nasemazweni amaningi emhlabeni jikelele. Ukuveza uthando lwakho nokunakekela kumama wakho kunezikhathi eziningi zokumnika izipho.
1. Isipho sikamama sosuku lokuzalwa
Usuku lokuzalwa lukamama luwusuku olungcwele kakhulu. Maka isikhathi lapho umama ekhona kule mpilo. Omunye wabantu ababaluleke kakhulu kuwe. Izipho ezibalulekile zosuku lokuzalwa lukamama njengezipho ezithile zezempilo, ukumfisela impilo echichimayo. Ukudla okusebenzayo ukusiza ukwengeza umsoco komama, amaphakheji okunakekelwa kwezempilo ezibhedlela noma ezikhungweni zokunakekelwa kwezempilo, imishini yezemidlalo, …
2. Isipho sika-10/10 sikamama
Okthoba 20 – Usuku Lwabesifazane BaseVietnam. Usuku olubalulekile kwabesifazane. Sicela unikeze izipho futhi uthumele amazwi othando kumama wakho. Lolu wusuku lokuhlonipha abesifazane, ngakho izimbali ziyisipho esinenjongo kakhulu ngalolu suku. Ngaphandle kwalokho, ungakhetha izipho ezinjengamathawula, izingubo zokugqoka, … noma ubucwebe bobuhle bukamama wakho, isibonelo.
3. Usuku Lomama: ISonto Lesibili likaMeyi
Usuku Lomama luhlukile kwamanye amaholide. Lolu suku alunalo usuku olumisiwe, unyaka ngamunye uSuku Lomama luyiSonto lesibili likaMeyi. Lolu usuku ngokwesiko Losuku Lomama olwaqala e-United States. Isipho esifanele salolu suku singaba izitsha zasekhishini. Ngoba indawo yasekhishini yilapho umama enza khona ukudla okumnandi nsuku zonke. Ngakho-ke, ukunikeza umama umshini wekhishi okhululekile futhi wesimanje kuzomenza intandokazi.
4. Izipho zokugubha usuku lomshado wabazali
Isikhumbuzo somshado wusuku lokukhumbula uthando lukababa nomama. Lolu suku lubungaza injabulo abazali ababa nayo ndawonye kanye nobunzima abazali ababunqoba ndawonye ekuphileni. Impilo yesimanjemanje, esheshayo namuhla, isipho esinengqondo salolu suku isidlo esifudumele esinamalungu omndeni agcwele. Noma mhlawumbe isipho sempilo sabo bobabili abazali, noma i-albhamu enezithombe zeminyaka, ….
5. Isipho sikamama 8/3
Njengomhla zingama-20 kuMfumfu, mhla ziyisi-8 kuNdasa wuSuku Lwabesifazane Lomhlaba Wonke. Ngencazelo yalolu suku kwabesifazane. Kufanele ukhethe imikhiqizo yobuhle kamama wakho njengezimonyo, izinto zokunakekela isikhumba, amakha, … noma isifundo se-yoga sikamama wakho, isibonelo.
6. Izipho zoSuku Lomama kanye noNcibijane
Iholide le-Vu Lan kanye neholide le-Tet yizinsuku zakho zokubonga kumama wakho. Ngezifiso zikamama onempilo, ukuhlangana njalo ngenjabulo nezingane zakhe nabazukulu. Kulesi senzakalo, kufanele ukhethe isipho esinengqondo njengesithombe esinenkondlo, isisho sokubonga kumama wakho, noma isethi yamagama abusiswe ngokuphila isikhathi eside, …
Izipho eziyi-10 ezinengqondo zikamama ngosuku lwakhe lokuzalwa
Umama ungumuntu ohlonipheke kakhulu futhi ongcwele kakhulu empilweni yakho. Umama udela ukuphila kwakhe konke ukuze anakekele futhi anakekele wonke umndeni, Ngakho, ukuze ubonise ukubonga, ubonise inhliziyo yakho futhi unakekele umama wakho, kufanele ukhethe izipho ezinengqondo. Bheka lezi zipho ezinengqondo kumama.
1. Izimbali ezintsha – Isipho esizwakalayo sosuku lokuzalwa sikamama
Izimbali ezintsha ziyizipho ezimele ubuhle. Lesi sihloko singathanda ukunikezela isiphakamiso sokuqala sezipho zokuzalwa zikamama okufanele ungazinaki, okuyizimbali ezintsha. Thola, unakekele mayelana nezintandokazi zembali zikamama wakho, ukukhetha uhlobo aluthandayo. Isixha sezimbali esisha esilula esinekhadi elithandekayo. Ngicela uthumele umlayezo wothando oluqotho kanye nokubonga kumama wakho. Kuyoba okukhethekile kakhulu uma wenza isixha sezimbali ngokwakho futhi wenzela umama wakho ikhadi. Ngokuqinisekile lokhu kuzokwenza umama athinteke futhi ajabule.
2. Isethi ye-makeup ephezulu
Izimonyo ngokwemvelo ziyintandokazi yabesifazane. Kungakhathaliseki ukuthi umama wakho uneminyaka emingaki noma akazifaki izimonyo njalo, kuzoba nezikhathi lapho edinga khona izimonyo, njengokuthi: Ukuya emshadweni, ukuhlangana nabangane, ukuphuma ngoSuku LukaNcibijane, njll. Nakekela umama wakho isikhumba Khetha izimonyo othanda ukufanisa. Uma isikhumba sikamama wakho sinamabala amnyama, i-pigmentation, imibimbi, kufanele ukhethe isethi yokwakheka enezithako ezengeziwe zokunakekelwa kwesikhumba kuye.
Inkomba: Izipho eziphezulu eziyi-10 eziphusile zokuzalwa zomfazi
3. Isipho sosuku lokuzalwa sikamama ingubo yemfashini
Ingubo noma izingubo nakanjani kuyoba isipho esiwusizo kakhulu futhi esiphumelelayo. Kungakhathaliseki ukuthi mangaki amasethi ekhabethe likamama wakho, lesi sipho sakho ngeke sikhohlwe. Ngakho-ke, ihembe lesitayela noma ingubo yesitayela, njll ngokuqinisekile izojabulisa umama njalo. Ukuze uthenge ingubo yemfashini efanelekayo yobudala bukamama wakho, kufanele unake iso lakhe lobuhle kanye nomuzwa wemfashini. Ungakhetha amaphijama ngezindwangu ezithambile, ezipholile ukuze umama wakho azigqoke kahle ekhaya. Noma khetha izingubo zikanokusho umama azozigqoka uma eya ephathini.
Kulolu suku nenkathi, umkhuba wokugqoka imigexo awukona nje ukusiza ngobuhle. Umgexo nawo uphethe inkolelo ngempilo, inhlanhla, ukunethezeka empilweni, … Lena isesekeli esincane, kodwa uma ukhetha ngokufanele, kuyoba isipho esinengqondo kumama wakho. Umgexo onamaparele acwebezelayo namadayimane uzosiza umama ukuba azethembe kakhudlwana futhi avelele. Noma umgexo wamatshe, onobuso bukaBuddha, isibonelo, uzoba njengesifiso sokuthula nempilo kamama. Sicela uthembele kubuntu bukamama wakho kanye nesitayela sokumkhethela umgexo ofanele.
5. Izicathulo ezithambile
Kuvame ukuthiwa izicathulo ezinhle zizokuyisa ezindaweni ezinhle. Ipheya elihle lezicathulo zikamama lizokhombisa ukumnakekela nokunakekela zonke izinyathelo zikamama wakhe. Izicathulo ezithambile, lokho kuyiqiniso. Uma kuziwa ekupha umama izicathulo, ungacabangi ngezithende eziphakeme zemfashini laphaya. Ngisho nalapho uthenga izicathulo zikamama ngenjongo yokuzijabulisa, kufanele uthenge kuphela mayelana no-2-3cm ukuphakama, futhi nakanjani izinto ezithambile. Okufanelekile, ukunikeza umama wakho okuthandayo, kufanele unikeze okuthandayo kuma-loafers, izicathulo eziyisicaba, nezicathulo zezemidlalo ngoba ziqinile, zithambile futhi zikhululekile.
6. Ukudla okunomsoco
Enye yezindlela zokubonisa uthando lwakho kumama wakho iwukunakekela izidingo zakhe kanye nezinkinga zempilo. Ebudaleni kamama, impilo yakhe iqala ukwehla, ngakho udinga ukudla okukhethekile. Ukudla okunomsoco kuyisipho esiwusizo futhi kukhombisa ukunakekelwa okukhethekile kwempilo kamama.
7. Izikhwama zemali
Izikhwama ziyisipho esilula, esiwusizo. Nakuba izikhwama zezandla azifani nezinye izipho ezibizayo neziyinkimbinkimbi. Isikhwama semali esihle siyindlela yokubonisa ukunakekela kwakho kumama wakho. Isikhwama sesandla sizoba seceleni kwakho noma kunini, noma kuphi. Isikhwama sesandla sizosiza umama ukuthi agcine amaphepha akhe kamazisi, agcine imali ngokucophelela.
Naka isikhwama sikamama wakho, uma sesikhulile, lesi yisipho esiwusizo kuye. Umama uhlale engumuntu okhathalelayo, ngakho lapho ephuma endlini, kuyodingeka aphathe izinto eziningi. Esikhundleni sokumvumela ukuba aziphathele izikhwama zakhe, mnike isikhwama esithe ukuvuleka kancane. Ukukhetha isikhwama kusiza umama ukuthi abe nesitayela esithe xaxa lapho ehla ngomgwaqo, kulula futhi akhumbule ukumkhethela isikhwama esiqinile nesinhle.
Yeqa izinto zemfashini nobuhle. I-nebulizer nayo iyisipho esihle kumama. Lesi sipho sizosiza umama abe nomoya opholile ngosuku olushisayo lwasehlobo. Ngaphezu kwalokho, ibuye ifake umswakama, isiza isikhumba sikamama ukuthi singomi, angakwazi futhi ukuthungatha ubuso bakhe, amafutha abalulekile, axoshe omiyane … more. Lokhu kungashiwo njengesipho esiwusizo nesiwusizo kumama.
10. Umshini wokubhucunga
Impilo yakhe yonke enakekela umndeni wakhe, unina akasenampilo njengakudala. Ngezinye izikhathi ngizwa ubuhlungu nokukhathala ngemisebenzi yansuku zonke. Ikakhulukazi ngezinsuku ezinomoya nelanga. Ukubhucunga sekuyisikhathi eside kuyindlela yokusiza ukubuyisela umzimba. Ukubhucunga kuzosiza ukuthuthukisa ukujikeleza kwegazi. Lokhu kuzosiza ekwelapheni izifo zenhliziyo nemithambo yegazi. Siza umama aphumule ngokomqondo. Ukuthenga umshini wokubhucunga umama kufanelekile kakhulu kubantu abaneminyaka ephakathi, lokhu futhi kuyindlela yokukusiza ukuba unakekele impilo kamama wakho ngempumelelo kakhulu.
IVietnam inesiko “lokukhumbula umthombo lapho uphuza amanzi”. Usuku lokuzalwa lukamama luyingqopha-mlando ebalulekile empilweni kamama lapho ehlangabezane nezigigaba zempilo. Leli yithuba lokuthi ubonise ukubonga nenhlonipho. Sethemba ukuthi lesi sihloko sizokusiza ukhethe isipho sokuveza lowo muzwa.
Buka Okuningi: Izilinganiso eziphezulu eziyi-10 zezempilo zikagesi namuhla (Ithiphu: 2021)
Xem Thêm Cảnh báo những thông tin về thai nhi 38 tuần tuổi bố mẹ nên nhớ | Muasalebang
Máy Lọc Không Khí Nào Tốt? TOP 5 Sản Phẩm Chất Lượng | Muasalebang
Samsung Galaxy Note 5 cũ 99% giá rẻ, 1 đổi 1 trong 30 ngày, BH 6 tháng | Muasalebang